Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ်တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများဖြေခြင်းနှင့် Make လုပ်နည်း
iPhone ကိုမရှိရင် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ
ဒီဇင်ဘာလ 21, 2019 အားဖြင့် FaceTime လမ်းညွှန်aComment ချန်ထား
သငျသညျအစဉျအမွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကောက်ကနေတိုက်ရိုက်တစ်စုံတစ်ယောက်မခေါ်နိုင်သည့်အခါနေ့ကိုရောက်လာမည်ဟုတွက်ဆခဲ့ကြ? မည်သို့ပင်ကသိပ္ပံဝတ္ထု၏ဖန်ဆင်းသောပစ္စည်းပစ္စယပေါ်လာသော, သို့သော်သင်သည်တတ်နိုင်, အမှန်တကယ်, အပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလုပ်ရ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့. Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွင်, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုက iPhone မှတဆင့်စီးပဲ့ကိုင်နေကြတယ်, သေးသင်သည်အခြားအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာသင့်ရဲ့ iPhone နှင့်အတူပင်ဖြေဆိုတစ်ခုသို့မဟုတ်အိတ်ကပ်ထဲမှာပုနျးရှောငျနိုငျ, သင့်ရဲ့လက်ပတ်နာရီမှတိုက်ရိုက်တစ်ခုလုံးဆွေးနွေးမှုအပေါ်တင်ဆောင်လာသော.
1 Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ်တစ်ဦးခေါ်ရန်ဖြေဆိုခြင်း
2 Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ်တစ်ဦးခေါ်ရန် Making
ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ကြွလာသောအခါအမှတ်မှာ, သငျသညျရိုးရှင်းစွာအစိမ်းရောင်အဖြေခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါသင့်တယ်. သင်ကဖြေဆိုဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့မယ်လို့ဖြစ်ရပ်အတွက်, သငျသညျအနီရောင်ကျဆင်းမှုခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါနှင့်စကားသံကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုမှခေါ်ဆိုမှုပေးပို့နိုင်ပါတယ်.
သငျသညျထိုအတူချဉ်းကပ်သင့်ရဲ့ iPhone ဖြေကြားသို့မဟုတ်ချက်ချင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်. ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ကြွလာသောအခါအမှတ်မှာ, အဲဒီ options ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်သရဖူသို့မဟုတ်ပွတ်ဆွဲအထက်သို့လှည့်.
သင်သည်သင်၏ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အစောပိုင်းတိတ်ဆိတ်ဖို့စုရုံးသို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်အလုပ်ရှုပ်နေနှင့်လျစ်လျူရှု၌နေသောဖြစ်ရပ်အတွက်, သငျသညျလျှင်မြန်စွာသုံးစက္ကန့်အဘို့သင့်လက်၏အစွန်ပလွံနှင့်အတူ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ Display ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းအားဖြင့်ချဉ်းကပ်ခေါ်ဆိုခများ၏အသံသည်တိတ်ဆိတ်နိုင်ပါတယ်. ကြောင်းအမှတ်အသာပုတ်မှာတိတ်ဆိတ်အာဏာအပ်နှင်းကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ရန်.
Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ်တစ်ဦးခေါ်ရန် Making
သင့်အနေဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်သရဖူအောက်ရှိဘေးထွက် button ကိုတွန်းအားဖြင့်သင့်အနှစ်သက်ဆုံးစာရင်းတွင်လူတို့အားတယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနိုင်ပါတယ်. ထိုအခြိနျတှငျ, ရွေးချယ်ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်သရဖူ turn တစ်ခုသို့မဟုတ်လူရဲ့အတိုကောက်ကိုထိပုတ်ပါ. ထိုအခြိနျတှငျ, မျက်နှာပြင်၏အခြေစိုက်စခန်း left ထောင့်ရှိခေါ်ဆိုမှုသင်္ကေတကိုထိပုတ်ပါ.
သင်သည်သင်၏အနှစ်သက်ဆုံးစာရင်းတွင်မဟုတ်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုခေါ်ဖို့လိုအပျကွောငျးကိုချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ်ဖုန်းလျှောက်လွှာကိုအသာပုတ်နှင့်သင်ခေါ်ဆိုခရန်ဆန္ဒရှိနှင့်အတူထိတွေ့အတွက် get ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်သရဖူသို့မဟုတ်ပွတ်ဆွဲဖွင့်. သငျသညျထိုနည်းတူဟုအားဖြင့်သင်တို့အဘို့အတယ်လီဖုန်းဖုန်းခေါ်ရန် Siri ကိုမေးနိုငျ “ခေါ်ရန်” နှင့်အဆက်အသွယ်သင့်ရဲ့ rundown အတွက်တစ်စုံတစ်ယောက်ကနာမည်. Siri ကိုသင်တို့အဘို့တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုခထားမည်.
Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ် Talking စတင်ချိန် မှစ. အတန်ငယ်ပုံမှန်မဟုတ်သောခံစားရ, ဒါကြောင့်အုန်းအုန်းသဲသဲအဲဒီမှာပတျဝနျးကငျြရဲ့အခါ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စပီကာကနေတစ်စုံတစ်ယောက်ကစကားကိုနားထောငျဖို့ခက်ခဲဖြစ်လေ့ကတည်းကနှငျ့သငျပွင့်လင်းထဲမှာနေတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အကွာအဝေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသင့်ပါတယ်. တစ်ခုချဉ်းကပ် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည်လက်ခံခြင်း, ဘယ်ကိစ္စမဆို, သငျသညျတစ်စုံတစ်ယောက်နှငျ့စကားပွောဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့်သင့် iPhone ကိုအနီးကပ်များကမပေးကြောင်းထိုအဖြစ်အပျက်အတွက်အလွန့်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေ. ထို့အပြင်, သင်ချဉ်းကပ် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဖြေကြားနိုင်ပါတယ်, လိုအပ်သောသင့်ရဲ့ iPhone မှရတဲ့အဖြစ်အချိန်အများကြီးအဖြစ်ယူ, သငျသညျပွငျဆငျအခါနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကျော်အကူးအပြောင်း. မဟုတ်မဆိုပိုပြီးလွဲချော်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု.
အကြောင်းကိုပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်များလည်းပါဝင်သည်သောဤဆောင်းပါးအထဲက Check Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ်တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများဖြေခြင်းနှင့် Make လုပ်နည်း iPhone ကိုမှချိတ်တွဲခြင်းမရှိဘဲ. ဆောင်းပါးဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ, အဖြေဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကရှင်းပြသည်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာအလွယ်တကူဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု.
အောက်မှာ Filed: FaceTime Download Tagged နှင့်အတူ: Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ်တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများဖြေခြင်းနှင့် Make လုပ်နည်း